Carlos Tevez oo ka sheekeeyey farqi layaab leh oo u dhexeeya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Carlos Tevez oo ka sheekeeyey farqi layaab leh oo u dhexeeya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo?
(14-9-2018) Cayaaryahankii hore ee xulka dalka Argentina iyo Manchester United Carlos Tevez ayaa ka sheekeeyey farqi layaab leh oo u dhexeeya Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo Xiddigahaas oo uu labadaba Garoon lagalay lana qaatay Tababar.
Carlos Tevez” Waxaan doonayaa in aan sheego farqiga u dhexeeya Saaxiibadey Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kuwaas oo aan si wanaagsan u garanayo isla Markaana aan lasoo Cayaaray.
Xiddiga dalka Argentina ayaa sheegay in Weeraryahanka dalka Portugal ee Cristiano Ronaldo caado ahaan uu u leeyahay in uu qaato Tababarka ugu adag sidoo kalana waxa uu Xooga saaraa ayuu yiri in uu Jiimka tago oo biro qaado in badan waana Cayaaryaahnka kaliya ayuu yiri ee aan marna kaga soo hormari waayey Tababarka Gaar ahaan markii aan wada ahayn ayuu yiri Manchster United.
Tevez ayaa sidoo kale sheegay in Cayaaryahan Lionel Messi uu yahay mid inta badan aan qaadan Tababar adag waxaana uu Xooga saaraa ayuu yiri sidii uu u baran lahaa farsamooyin qaabka loo tuuro bulisyoonada iyo Rigoorooyinka weligeyna kumaan arag ayuu hadalkiisa sii raaciyey qaybta Jiimka farqigaas ayaana u dhexeeya ayuu yiri Carlos Tevez.
Cristiano Ronaldo oo dhawaan ku biirey Juventus markii uu kategay Real Madrid 9 Sano kadib ayaa dhaqaatiirta Juventus waxa ay sheegeen in jir ahaan uu la midyahay Cayaaryahan 20 Sano jir ah isla Markaana boqolkiiba konton Jirkiisu uu yahay murqo sidaa daraadeed uu garoomada kusii jiri doono mudo dheer.